မွေးမြူရေးအစာကျွေး grinder ရောနှော,ရောင်းရန်ကြက်အစာကျွေးကြိတ်,မွေးမြူရေးအတွက် grinder အစာကျွေး
ပါဝါ:11kw + 4kw
စွမ်းရည်:1250~ 1500kg / h
မွေးမြူရေးအစာကြိတ်ခွဲစက်ကိုကျေးလက်ဒေသရှိအိမ်ထောင်စုများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, သေးငယ်တဲ့အစာကြိတ်, ဒေါင်လိုက်ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုပေါင်းစပ်ထားသည်, ရောနှောခြင်းနှင့်တ ဦး တည်းသို့အလျားလိုက်သယ်ဆောင်ပစ္စည်းများ,တိရစ္ဆာန်အစာအတွက်အမှုန့်များကိုရောစပ်ပြီးနောက်အစေ့များကိုကြိတ်ခွဲလေ့ရှိသည်. တိရိစ္ဆာန်အစာကြိတ်ခွဲစက်နှင့်ရောနှောထားသောအစာများသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်သင့်တော်သည်, အသေးစားနှင့်အလတ်စားလယ်ယာမြေများနှင့်အစာအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သည့်ပုံစံများ. ကြက်အစာကြိတ်ခွဲစက်များတွင်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းရှိသည်, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်, အဆင်ပြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်, ရောစပ်ခြင်း, တ ဦး တည်းအတွက်လေနှင့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို. ယူနီဖောင်းအစာကျွေးပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဖွဲ့စည်းမှု၏ contents. မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု, သေးငယ်တဲ့အလုပ်အကိုင်areaရိယာ, အလုပ်သမားချွေတာခြင်း, ဖုန်မှုန့်နည်း, ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်.
အလိုအလျောက်စုတ်ယူခြင်းနှင့်အတင်းအဓမ္မကျွေးမွေးခြင်း ၂ ခုကိုကြိတ်ခွဲသောယန္တရားတစ်ခုရှိသည် (ကြိတ်များအတွက်စံပြရွေးချယ်ရေးအရသိရသည်), ပစ္စည်းစို့အခါသို့မဟုတ်ကြိတ်ခွဲအခန်းထဲသို့, သံတူထိုးနှက်ခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်မှု, လျှင်မြန်စွာအမှုန့်သို့မဟုတ် granular သို့နှိပ်စက်, ပြီးတော့ centrifugal အင်အားသို့မဟုတ်လေထုအကြောင်းမဲ့, တစ် ဦး က impeller အခန်းထဲသို့ဆန်ခါတဆင့်.
နှစျခုရောစပ်ယန္တရား: ပစ္စည်းပန်ကာလှည့်သည့်အခါ, ပစ္စည်းအတင်းအဓမ္မနို့တိုက်ကျွေးရေးပိုက်ကိုစလှေတျခဲ့ B က impeller အခန်းထဲကရေးစပ်သည်, ပြီးတော့စည်နှိုးဆော်ထိပ်ပန်ကာမှရာထူးတိုးလိမ့်မည်, ထို့နောက်ပစ္စည်းယူနီဖောင်းသည်နှင့်နှိုးဆော်စည်အတွက်ပစ်, ရောစပ်တက်စည်ပစ္စည်းလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံစံန်းကျင်လည်ပတ်, ရောနှောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်ရန်သကဲ့သို့. ရောနှောအကျိုးသက်ရောက်မှု.
1.ဤမွေးမြူရေးအစာကြိတ်ခွဲစက်ကိုအဓိကအားဖြင့်ခြောက်သွေ့သောတိရိစ္ဆာန်အစာအမျိုးမျိုးကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ရောနှောခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်, ကြိတ်စက်, ရောနှောပါဝင်သည်.
2.မွေးမြူရေးအသေးစားလယ်သမားများအတွက်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးကြိတ်ခွဲစက်ကိုအများဆုံးအသုံးပြုသည်, ပြီးတော့ဝက်တွေအတွက်အစာတွေကိုရောနှောပြီးနှိပ်စက်နိုင်တယ်,နွားတွေ,မြင်းများ, ယုန်, ကြက်သား,ငါး, ချိုးနဲ့ဒါ.
3.တိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးကိုကြိတ်ခွဲရန်မွေးမြူရေးအစာကြိတ်ခွဲစက်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်, ဘောဇဉ်, ပြောင်းဖူးလို,ဂျုံ,ပဲမျိုးစုံ,နှင့်အခြားသူများတိရိစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဖြစ်စဉ်ကိုအဘို့လုပ်နိုင်သောအမှုန့်ရန်,
4.ဝက်အူကူး,ကြိတ်ခွဲစက်နှင့်ရောနှောစက်ကိုစက်တစ်ခုတည်းတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်, ဒါကြောင့်သေးငယ်တဲ့နေရာနှင့် install လုပ်ဖို့လွယ်ကူသော,ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သယ်ဆောင်ရန်.
ကြက်အစာကျွေး grinders သတ်မှတ်ချက်
2.4× ၁.၃ × ၂.၉